काज विकृति प्रहरीमा बढ्दो, पाँच हजार सात सय प्रहरी काजमा « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
काज विकृति प्रहरीमा बढ्दो, पाँच हजार सात सय प्रहरी काजमा
काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकुमा प्रहरीको दरबन्दी एक सय ४१ जनाको हो । तर, महाशाखामा दुई सय ११ प्रहरी कार्यरत छन् । तीमध्ये करिब एक सय प्रहरी काजमा आएका हुन् भने महाशाखामै दरबन्दी भएका करिब ५० जना अन्यत्रै काजमा बसेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र मातहतमा तीन हजार एकजनाको दरबन्दी छ । तर, परिसरमा दुई हजार नौ सय ५६ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये पनि डेढ सय काजमा छन् । परिसरको दरबन्दीका करिब एक सय प्रहरी भने काठमाडौंबाहिर काजमा छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रहरीका हरेकजसो कार्यालयमा काज विकृति छ । प्रहरीमा करिब पाँच हजार सातजना काजमा कार्यरत छन् । अधिकांशले घरपायक तथा आकर्षक ठाउँमा बस्न काज मिलाउने गरेका छन् । काज विकृतिले सुरक्षा व्यवस्थामा समेत असर परेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । तर, विकृति हटाउने प्रयास भएको छैन ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी माधव जोशीले पाँच हजार ६ सय ९० प्रहरी काजमा रहेको जानकारी दिए । अधिकांशलाई संगठनकै आवश्यकताअनुसार काजमा
कहाँ कति प्रहरी काजमा ?
प्रहरी मुख्यालयबाटः २१२१
महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाटः ८५७
मध्यपश्चिम क्षेत्रबाटः ४४६
सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाटः ४७९
कुन पदका कति ?
कार्यालय सहयोगीः २५७